LG G3 + LG G Watch အတွက်အကောင်းဆုံးအပေးအယူကတော့ဖမ်းမိတဲ့နေရာဘယ်မှာလဲ။ | Androidsis
Cristina Torres နေရာချထားပုံ | | LG, Android cheat
ကျနော်တို့ကိုသွားသည့်အခါ LG G3 တိုက်ရိုက်တင်ဆက်မှု ကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေသည့်အရာများစွာရှိသည်။ terminal သည်ယခုအထိ၎င်းကို ဆက်လက်၍ ပြောဆိုရန်ကစားစရာများစွာပေးထားသော်ငြားစောင့်ဆိုင်းမှုများပြီးနောက်၎င်း၏ဖြန့်ချိသည့်နေ့ရက်ရောက်လာပြီ။ Androidsis တွင်ရှိနှင့်ပြီးသားဆိုပါစို့ LG သည်ကြော်ငြာခြင်းလောကတွင်လှည့်လည်ချင်သည်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးတွင်ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်သည်အလားတူလုပ်ဆောင်ရန်ဆန္ဒရှိပုံရသည်။ LG G3 အထင်ကရ terminal ၏ Premiere သည်စပိန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးကမ္ဘာတစ် ၀ န်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
အမှန်တရားမှာ terminal ၏စျေးနှုန်းကိုယူရို ၅၉၉ ဖြင့်ကြေငြာခဲ့သော်လည်းလက်ရှိစျေးကွက်ပေါက်စျေးသည်တင်ဆက်မှုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းထက်များစွာနိမ့်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့အားအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဓိကကမ်းလှမ်းချက်များအရ၎င်းသည်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအမြတ်အစွန်းများစွာရရှိပုံကိုသင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်၊ LG G3 + LG G Watch combo သည်ယူရို ၅၀၀ အောက်သာရှိသည်စမတ်နာရီ၏ဈေးနှုန်းသည်ယူရို ၁၉၉ ဖြစ်ပြီးစျေးနှုန်းသည်သိသိသာသာမြင့်မားသည့်စျေးကွက်အတွက်မြှင့်တင်ခြင်းသည်အနည်းဆုံးအလွန်သက်သာသည်။ LG ကဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်တယ်။
ဒီဝေးလာကြသူသင်တို့အဘို့အဘယ်အရာကိုရှာဖွေနေ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ LG G3 movistar သည် LG G Watch + LG G3 combo စျေးနှုန်းအတွက်ယူရို ၄၉၉ ဖြင့်ပထမဆုံးစျေးနှုန်းကိုကြေငြာခဲ့သော်လည်းသင်ပြောနိုင်သည်။ အကယ်၍ LG G499 သည်ယူရို ၅၉၉ ကျသင့်ပြီး LG G Watch သည် ၁၉၉ ယူရိုဖြင့်ရောင်းချလျှင်ငွေ ၃၀၀ ယူရိုရှိသည်ဟုရှေးခေတ်အကောင့်များကဖော်ပြသည်။ နီးပါးဘာမျှမ!
သို့သော် Movistar ထိုးစစ်ပြီးနောက်အခြားသူများရောက်လာလိမ့်မယ်။ လွန်ခဲ့သောနာရီများက Vodafone က LG G3 နှင့် LG G Watch တို့ကိုအခြားပြိုင်ဘက်ဖုန်းများနှင့်အတူတူပင်စျေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ပြီးတော့မကြာခင်မှာပဲ Orange, Amena ရဲ့ဈေးချိုတဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီဟာသူတို့ဟာဒီထက်ပိုပြီးဈေးချိုနေ ဦး မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ သင့်အမှု၌, တစ် combo ကိုင်ရ LG G3 + LG Watch သည် ၄၂၉.၀၁ ယူရိုသာရှိသည်.
ဒါကမဖြစ်နိူင်ပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်သူကမှကျွန်ုပ်တို့ကိုငွေစျေးနှုန်းနဲ့ရွှေကိုများများပေးလေ့မရှိတာကြောင့်တကယ်တော့မြှင့်တင်ရေးရဲ့နောက်ကွယ်မှာလှည့်ကွက်မရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။ အနည်းဆုံးတော့အမြဲတမ်းသိုမဟုတ်သိုဝှက်ထားသောကုန်ကျစရိတ်များဖြင့်လှည့်ကွက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ များသောအားဖြင့်အော်ပရေတာများမှပြိုကျမှုများကိုပင်ကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ရပါ။ တစ်ခုတည်းသောလှည့်ကွက်မှာ LG ၏စီးပွားဖြစ်မဟာဗျူဟာအသစ်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့်ဖြန့်ဖြူးရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဇူလိုင်လလတွင်ထုတ်ကုန်နှစ်ခုလုံးမှယူနစ်နှစ်သောင်းခန့်သာဖောက်သည်များကိုသွေးဆောင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကြိုက်တတ်တဲ့စျေးကွက်.
ဒီစိတ်ကူးနဲ့အတူစမတ်နာရီကိုရှေ့တန်းနေရာမှာထားတယ်။ စမတ်နာရီများစွာရှိတာအမှန်ပါပဲ၊ အမှတ်တံဆိပ်အနည်းငယ်ကသာသူတို့နှင့်အတူအောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ်။ LG အတွက်တော့ဒီ gadget တွေအကြောင်းကိုမသိခြင်းကအတော်အသင့်ဆုံးရှင်းပြချက်ဖြစ်တယ်။ ထိုသူတို့ကဤအမှု၌ပြုကြပြီ LG G3 စပိန်တွင်ရောင်းချ.
ဆိုလိုသည်မှာမိုဘိုင်းစျေးကွက်၏စီးပွားဖြစ်မဟာဗျူဟာအပြောင်းအလဲတစ်ခုလုံးနှင့်အပြောင်းအလဲရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် terminal ကိုမတန်တဆစျေးနှုန်းဖြင့်စတင်ခြင်းနှင့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းတန်ဖိုးလျော့သွားခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ LG ကဒီအကြံဥာဏ်ကိုဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်ကပထမဆုံးစမ်းသပ်ကြည့်ချင်တယ် နည်းပညာလောကတွင်စံပြုခဲ့သောစိတ်ပြောင်းလဲမှုများစွာရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G3 + LG G Watch အတွက်အကောင်းဆုံးအပေးအယူကတော့ဖမ်းမိတဲ့နေရာဘယ်မှာလဲ။
Lenovo Golden Warrior A8 သည်ယူရို ၁၀၀ အောက်သာရောင်းချနိုင်သော ၈ core သတ္တဝါဖြစ်သည်
Xposed အတွက် Android L လိုမျိုးကြည့်ပါ